Inweta Email gị na Igbe mbata | Martech Zone
Inweta Email gị na Igbe mbata
Wenezde, August 17, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
GetResponse ebiputala ihe di mfe infographic na-enye ndị na-ere ahịa nghọta ka esi eme ka ozi email ha ka mma yana whitepaper na isiokwu dị ka nke ọma.
Site na GetResponse: know maara na dịka nchọpụta sitere na MarketingSherpa mere n'oge na-adịbeghị anya, otu n'ime ozi ịntanetị isii agaghị eru ebe ọ na - aga - ya bụ igbe nnabata onye debanyere aha ya? Ndị na-emeghị ga-egbochi a spam iyo, na-eme ka ọbụna ndị kasị mma n'ụwa template email na-abaghị uru. Ozi ọma ahụ bụ, enwere ike ịgbanwe nke a. Site na ahụmịhe anyị na inye + 99% mgbapụta, anyị maara etu esi agbanwe ya. N'ezie, anyị chọrọ ka ị mata. Ya mere, anyị bịara na "ndepụta" nke usoro ndị dị mkpa ma ọbụlagodi kpebiri ime ka ọ bụrụ "enyi na enyi". Ihe omuma ihe omuma zuru oke.
Anyị na ụlọ ọrụ na-eziga ozi email ha n'oge na-adịbeghị anya na nso nso a ma anyị aghọtaghị ụfọdụ elele dị n'iji onye na-eweta ọrụ email. Ndị a bụ ụfọdụ:
Ndị na-enye ọrụ email nwere usoro nhazi njikwa ibiaghachi. Ọtụtụ oge, ndị ọrụ nwere igbe mbata zuru oke ma ọ bụ email ha na-adị nwa oge. ESP ga-anwale ozi ịntanetị mgbe enwere nro bounces ma kpuchido ụlọ ọrụ gị site na wepu aka na adreesị email na ike bounces (ntụgharị adreesị ozi-e anaghị adị).
Email na enye ọrụ nwere akuko. Agbanyeghi na onyonyo na-egbochi ikike ịhụ ma ndị nnata meghere email gị, mepee ma tụọ ọnụọgụ ọnụọgụ na njikọ nwere ike inyere ụlọ ọrụ gị aka melite ọdịnaya ha ma ọ bụ imewe ha site na ịnye oke ozi mkpesa.
Ndị na-enye ọrụ email na-ezute ọnọdụ nchịkwa maka izipụ email na data nzuzo. Imebi ihe omume US-SPAM US ma ọ bụ ntuziaka EU na Europe / 2002/58 / EC (ọkachasị Nkeji edemede 13) nwere ike iduga na adreesị IP edepụtara, ma ọ bụ ka njọ, mmebi iwu mebiri emebi. Iji aha ọma ESP ga - ahụ na ị naghị emebi iwu ọ bụla.
Ekekọrịta, Zọpụta ma Chọta na Trunk.ly
Usoro ahia 21 iji kpalie / kpasuo ndi oru ibe gi iwe